Budata WhatsApp Messenger maka Windows
Free Budata maka Windows (140.00 MB)
Budata WhatsApp Messenger,
WhatsApp bụ ngwa dị mfe iji wụnye ngwa ngwa ị nwere ike iji na ekwentị mkpanaaka na Windows PC - kọmputa (dị ka ihe nchọgharị weebụ na ngwa desktọọpụ). Nwere ike ibudata ma jiri WhatsApp na ekwentị gị ma ọ bụ jiri ya dị ka ngwa desktọọpụ na kọmputa Windows PC ma ọ bụ Mac gị. Ngwa desktọọpụ WhatsApp na-arụ ọrụ mmekọrịta na ngwa WhatsApp arụnyere na ekwentị gị. Na ndị ọzọ okwu, mgbe a WhatsApp ozi rutere na gị gam akporo ekwentị / iPhone, ị nwere ike ịlele na zaghachi ya na kọmputa gị. Ọ bụ ezie na ngwa weebụ nke WhatsApp adịchaghị elu, ọ na-arụ ọrụ ya. WhatsApp maka Windows na-emeziwanye na atụmatụ ọhụrụ agbakwunyere kwa ụbọchị.
WhatsApp PC, nke na-ezute anyị dị ka nsụgharị desktọọpụ nke ngwa ngwa ozi a ma ama WhatsApp Messenger, na-enye anyị ohere iji WhatsApp na kọmputa anyị.
Na ngwa, nke a na-enye kpam kpam nefu, anyị nwere ike iso niile anyị ozugbo ozi na desktọọpụ na zipu faịlụ, foto na vidiyo na ndị enyi anyị. Desdị Desktọpụ nke WhatsApp ozi, nke na-enye anyị ohere iji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ atụmatụ niile dị na nsụgharị mobile, na desktọọpụ bara ezigbo uru.
Ozi - Mfe, Ozi a pụrụ ịdabere na ya: Gwa ndị ezinụlọ na ndị enyi nefu. WhatsApp na-eji njikọ intaneti ekwentị gị eziga ozi, yabụ na ị gaghị akwụ ụgwọ maka SMS.
Otu Nkata Otu - Otu I Ga-acho Ikwurita: Gwa ndi otu di nkpa gi okwu dika ndi ezi nulo gi na ndi enyi gi. Site na mkparịta ụka otu, ị nwere ike ịkekọrịta ozi, foto na vidiyo na ihe ruru mmadụ 256 notu oge. Nwere ike ịkpọ aha ndị otu gị, mechie ya ma ọ bụ tọọ ọkwa dị ka mmasị gị si dị.
WhatsApp na Web na Desktọpụ - Nọgide Na-akparịta ụka: Site na WhatsApp na weebụ na desktọọpụ, ị nwere ike ịmekọrịta mmekọrịta gị niile na kọmputa gị. Nihi ya, ọ dịịrị gị mfe ịga nihu na mkparịta ụka site na ngwaọrụ ịchọrọ. Budata ngwa desktọọpụ WhatsApp ma ọ bụ gaa na WhatsApp Web.
Oku WhatsApp & Oku Vidio - Kwuoro Onwe Ya: Site na oku olu, ị nwere ike ịgwa ndị ezinụlọ na ndị enyi okwu nefu, ọbụlagodi na ha nọ na mba ọzọ. Mgbe olu ma ọ bụ ederede ezughị, ị nwekwara ohere iji nnabata vidiyo were kparịta ụka ihu na ihu. WhatsApp ọdịyo na video ọkpụkpọ na-eji ekwentị gị internet njikọ.
Izuzo Nzuzo - Ndobe Oge Niile: Emechiela izochi ngwụcha ngwụcha na ụdị WhatsApp kachasị ọhụrụ. A na-echekwa ozi gị na oku gị site na izo ya ezo na njedebe. Naanị gị na kọntaktị gị nwere ike ịgụ ma ọ bụ gee ha ntị, ọ nweghịkwa onye nọ netiti (ọbụnadị WhatsApp) nwere ike ịgụ ma ọ bụ gee ha.
Foto na vidiyo - Kwuo isi ihe: can nwere ike izipu foto na vidiyo ozugbo site na WhatsApp. Cannwere ike ịkekọrịta oge dị mkpa ị weghaara na igwefoto dị na ya. Ọsọ njikọ gị enweghị isi; Izipu foto na vidiyo na WhatsApp bụ ngwa ngwa.
Ozi olu - Kwue Nuche Gị: can nwere ike ịdekọ olu okwu iji kwuo obere ndewo ma ọ bụ kwuo ihe dị ogologo site nitinye otu mgbata.
Ihe ederede - ringkekọrịta Documents Mere Mfe: Zipu PDFs, akwụkwọ, akwụkwọ ntanetị, slideshows, na ndị ọzọ na-enweghị nsogbu nke email na ngwa ngwa ịkekọrịta faịlụ. Nwere ike izipu akwụkwọ ruru 100 MB.
Yabụ, kedu ka ị ga-esi budata Desktọpụ WhatsApp? Etu esi eji WhatsApp na kọmputa? Nwere ike iji WhatsApp na desktọọpụ kọmputa gị na-enweghị mkpa nchọgharị. Iji budata ngwa ngwa Desktọpụ WhatsApp, ihe ị ga - eme bụ; Na ịpị bọtịnụ WhatsApp Download dị nelu. (Ọ na-agba ọsọ na Windows 8.1 ma ọ bụ karịa ma ọ bụrụ na ị na-eji sistemụ arụmọrụ Windows 32-bit, ị ga-ebudata site na njikọ nke abụọ.) Installwụnye ngwa Desktọpụ Whatsapp dị mfe dị ka nbudata ya. Mgbe nbudata ahụ mechara, mepee faịlụ .exe ma soro ntuziaka iji mezue nwụnye.
Nwere ike iji WhatsApp na kọmputa gị nụzọ abụọ dị iche iche: WhatsApp Web na WhatsApp Desktop. WhatsApp Web bụ ihe eji eme nchọgharị na WhatsApp. WhatsApp Desktop bụ ngwa ị nwere ike iwunye na kọmputa gị. Desktop app na WhatsApp Web bụ ndọtị dabere na kọmputa nke akaụntụ WhatsApp na ekwentị gị. Ozi ị zitere ma nata na-emekọrịta netiti ekwentị gị na kọmputa. Yabụ ị nwere ike ịhụ ozi gị na ngwaọrụ abụọ ahụ.
WhatsApp Messenger Ụdịdị
Nha faịlụ: 140.00 MB
Mmepụta: WhatsApp Inc.